गर्जनका zeus परमेश्वरको | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त! गर्जनका zeus परमेश्वरको | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त!
गर्जनका zeus परमेश्वरको वैज्ञानिक गेमिङ धेरै उपलब्ध छ मोबाइल क्यासिनो स्वागत बोनस विभिन्न क्यासिनो मा. भइरहेको5रील,4पङ्क्ति र 30 paylines, यो स्लट प्राचीन ग्रीक देवता विषय आधारित छ. आकाश र प्राचीन ग्रीस मा गर्जन परमेश्वरको- Zeus यो स्लट को केन्द्रीय चरित्र छ. यो एकदम वास्तविक क्यासिनो को दुनिया मा परिचित छ, र अब उपलब्ध थपियो प्रगतिशील Jackpot सुविधा अनलाइन छ.
ठूलो मोबाइल क्यासिनो स्वागत बोनस संग सुविधाहरू
त्यहाँ प्राचीन ग्रीक भगवान Zeus.There आधारित धेरै स्लट को रील माथि वर्तमान तीन पाङ्ग्रा गर्दै छन्. को स्लट को पृष्ठभूमिमा अचम्मको देखिन्छ र एक brooding वातावरण सिर्जना गर्दा Zeus गाढा बादल thundering संग देखिन्छ.
यो खेल्छन् मोबाइल क्यासिनो स्वागत बोनस £ 500 को अधिकतम 0.10p को एक न्यूनतम संग. सिक्का मूल्यवर्ग देखि जान्छ 0.01 गर्न 1. "अतिरिक्त बेट" मार थपिएको बढयो दि्छ अतिरिक्त शर्त सेट. को रील स्पिन वा रील स्वतः स्पिन गरौं गर्न "Autospin" बटन थिच्नुहोस्.
सबै उच्च मूल्य प्रतीक Zeus समावेश जो विषय सम्बन्धित छन्, एक चीललाई, सिंह, गर्जन बोल्ट, एक फूलदान र आफ्नो पुष्पांजलि. The literals J, Q, K र एक कम-मूल्य प्रतीक हो.
सुनौलो Zeus मन्दिर जो केवल रील मा देखिन्छ जंगली छ 2,3र 4. यो एक विजेता संयोजन गठन गर्ने अन्य सबै प्रतीक विकल्प गर्न सक्छन् र सबै WINS यो समयमा दुगुना गरिनेछ.
प्राचीन ग्रीक मोबाइल क्यासिनो बोनस स्वागत
भाग्य को पाङ्ग्रा: तीन वा बढी आसन्न रील स्थिति कुनै पनि प्रतीक सट्टा पृष्ठभूमि देखाउँछ जब रील माथि वर्तमान तीन पाङ्ग्रा सक्रिय. पुरस्कार जो निम्नानुसार छन् पृष्ठभूमिमा देखाउन रील संख्या निर्भर:
तीन रीलों देखा : तपाईं संग एक मुक्त स्पिन प्राप्त हुनेछ4गर्न5थप wilds वा5गर्न7निःशुल्क spins वा मिनी वा माइनर Jackpot.
चार रीलों देखा: तपाईं संग एक मुक्त स्पिन प्राप्त हुनेछ5गर्न6थप wilds वा 10 गर्न 12 निःशुल्क spins वा माइनर वा मेजर Jackpot.
पांच रीलों देखा: तपाईं संग एक मुक्त स्पिन प्राप्त हुनेछ6गर्न 12 थप wilds वा 15 गर्न 50 निःशुल्क spins वा प्रमुख, मेगा वा ग्रैंड Jackpot.
अतिरिक्त बेट: वैकल्पिक अतिरिक्त शर्त सुविधा तपाईं खर्च हुनेछ 50% तपाईँको शर्त रकम आधारमा. जब सुविधा सक्रिय यो एक स्तर माथि गर्न भाग्य पाङ्ग्रा स्तरवृद्धि गर्नेछ र 'wilds थपियो' सुविधा मा एक अतिरिक्त जंगली प्रतीक थप्नेछ.
गर्जनका zeus परमेश्वरको किनभने यसको ग्राफिक्स गुणस्तर र आँखा तेतैतिर पृष्ठभूमि को Zeus श्रृंखला सबै भन्दा राम्रो स्लट को छ. यो उपलब्ध छ मोबाइल क्यासिनो स्वागत बोनस and the progressive jackpot feature takes the RTP to 96.05%.